Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » फोन उठाउने बित्तिकै किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यस्तो छ वास्तविकता
फोन उठाउने बित्तिकै किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यस्तो छ वास्तविकता
२०७७ माघ २६ गते सोमबार ०८:३४
फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर त्यसमध्ये...
उनको प्रस्ताव स्वीकृत मात्र भएन उनी आफैले टेलिफोनमा हेल्लो बोल्न सुरु गरे । जुन पछि सबैले प्रयोग गर्न थाले र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । -एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति २६ माघ २०७७, सोमबार २०:३४